Kostà Rikà: Mihatra Ny Lalana Vaovao Momba Ny Fifamoivoizana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2018 4:25 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa taona 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, nanohy niady hevitra, naneho hevitra, ary nitsikera ny lalàna vaovao momba ny Fifamoivoizana izay nihatra tamin'ny voalohan'ny herinandron'ny volana Martsa ny tontolon'ny bilaogy Kostà Rikàna. Maro no naneho ny tsy fahafaham-pony tamin'ny soso-kevitra naroso tao amin'ny lalàna vaovao.
Maro no tsy miombon-kevitra amin'ny sazy ara-bola goavana ho an'ireo mandika ny lalàna vaovao. Ankoatra izay, tsy dia nisy ny fampihenana ny sazy, araka ny efa nantenaina. Ny fitomboan'ny onitra dia midika bebe kokoa vola ho an'ny Minisiteran'ny Vola Miditra, mpanao politika, ary koa ho an'ny polisy misahana ny fifamoivoizana. Nacho ao amin'ny Media Blog [es] nanoratra! hoe:
Tsara ny sasany amin'ireo lalàna ireo. Na dia izany aza, tsisy dikany tsotra izao ny ankamaroany, ary natao mba hanaovan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana kolikoly hatrany ary koa hitaky vola tsy misy fanomezana tapakila, mitaky vola izy ireo mba hahafahan'ny solombavambahoakan'ny kongresy hahazo fiara raitra avy amin'ny volan'ny mahantra fa tsy laniana amin'ny fanamboarana lalan-kely.
Sary avy amin'i Carlos Luna, Lisansa Creative Commons.
Ankoatra izany, maro amin'ireo mpamily no tsy mahita hoe ahoana no ahafahan'ny polisy misahana ny fifamoivoziana hampihatra ny lalàna, raha toa ka mandika ny lalàna momba ny fifamoivoizana koa ny tenan'izy ireo. Bilaogera ao amin'ny Conejitos Suicidas [es] namoaka lahatsary nataon'ilay mpisera YouTube Carlossave, izay nandrakitra lahatsary ahitana polisy manamboninahitra mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha tafahoatra.
Sehatra hafa mampiahihahy mikasika ny Lalàna mifehy ny fifamoivoizana ny fitomboan'ny tahan'ny fisotroana toaka eo amin'ireo mpamily. Satria amin'izao fotoana izao, ny mpamily iray mamo, izay sambany mamo dia tsy ampidirina am-ponja rehefa tsy nandratra olona na nanimba zavatra. Haroldo Rivas ao amin'ny bilaogy Harol [es] nanoratra hoe:
Omaly, nifanaiky ny vehivavy sy ny lehilahy (rehefa avy nifampitabataba tahaka ny olona mahazatra indrindra eran'izao tontolo izao) fa ny mpamily sambany mamo dia tsy ampidirina am-ponja na dia mahasosotra aza ny fihetsik'izy ireo, ankoatra ny fitomboan'ny tahan'ny alikaola, nataon'izy ireo izany mba hiarovan-tena satria mpanao izany ry zareo. Rahoviana izy ireo no hanomboka hiasa amin'ny fiarovam-bahoaka sy ho an'ny mahasoa na ny volan'izy ireo? Mahamenatra…
Noho ity fisalasalana ity, ny fanontaniana lehibe avy amin'ny Kostà Rikàna dia hoe, handeha tsara araka ny tokony ho izy ao amin'ny firenena ve ity lalàna ity ary ho tombontsoan'ny olom-pireneny ny vokatra azo. Mae Moto ao amin'ny bilaogy Caballeros de la Luz [es] nanoratra hoe:
Saingy ny fanontaniana dia hoe, natao tokoa ho an'ny voalaza eo ambony ve izany (manondro ny taratasy feno nosoratana tao amin'ny bilaoginy momba ny Lalàna vaovao mifehy ny Fifamoivoizana: hanatsara ny toe-draharaha eny amin'ny arabe hipoka? Raha ny hevitro am-panetren-tena, ity fanavaozana amin'ny Lalànan'ny Fifamoivoizana ity dia vazivazy ratsy, fomba iray hahazoana vola avy amin'ny saranga antonony, izay ho fahavalo ratsy indrindra hatrany eo amin'ny saranga mpanankarena.
Manamafy ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fahatokisana izany fa manana lalàna vaovao noforonina eto amin'ny firenentsika i Kostà Rikà, Lalàna mifehy ny Fifamoivoizana ilay izy amin'ity tranga ity. Koa satria izany no lohahevitra lehibe resahana ao amin'ny bilaogy isan-karazany ao Kostà Rikà, tsara ho an'ny olona ny manana ity sehatra ity mba hanehoana ny zavatra tsapany sy tiany holazaina momba ireo fanapahan-kevitra miantraika amin'ny olom-pirenena.